युगसम्बाद साप्ताहिक - संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ?
Saturday, 04.04.2020, 10:32pm (GMT+5.5) Home Contact
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ?
Wednesday, 10.11.2017, 01:50pm (GMT+5.5)
संघ भनेको जोडिनु हो । त्यसैले यहाँ संघराज्य हुनुपर्छ भन्दा नेताले के बुझेर बोले, त्यो उनैलाई थाहा छैन । संघ राज्य भनेको फुटाउने, टुटाउने काम भएको छ । अझै पूर्णता आइसकेको छैन । भनेको के हो र हामी के भन्दैछौं भन्ने राम्रो बुझेर मात्रै बोल्नु र गर्नु राम्रो हो । तर, यहाँ नबुझेरै सबै बोल्ने र गर्ने भैदिए अझ संघमा त्यसमाथि ‘जातीय’ थपे । विरोध हुन थालेपछि । ‘पहिचान’ थपे, तैपनि कुरा जहाँको तहीँ छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गुपचुप होइन, सबैको राय परामर्श लिनु प्रजातान्त्रिक तरिका हो । सर्वप्रथम नेताको बुद्धिले संघको उल्टो अर्थ लाग्यो । संघ भनेको त समूह हो, टुक्रा होइन । पृथ्वीनारायण शाहले ५०–५५ वटा टुक्रे राज्यहरू जोडेर बनाएको नेपाल नै संघराज्य हो । अब यसलाई फोर्ने हो भने सही अर्थमा संघ हुँदैन, टुक्रे राज्यहरू मात्रै बन्छन् । यस्तो संगीन विषयमा पनि माओवादीले आवेशमा एक्लै निर्णय गरेर कांग्रेस, एमालेलाई समेत घिसा¥यो । कुमालकोटीका फेला परेका झिंगाले झैं कांग्रेस एमालेले होसै गुमाए । संघीयता आजै निल्नु न ओकल्नु भएको छ भने भोलि पूर्णरुपमा लागू गर्ने बेलामा के हालत होला र लागू नै भएमा पनि जिल्ला सरकारको प्रावधान नदेखिंदा अब जनताले केन्द्र सरकार बाहेकै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मान्नुपर्दा प्रदेश सरकार मान्नन बेजिल्ला जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो जनतालाई हैरान पार्ने काम मात्रै हुनेछ ।
बाइसे–चौबीसे कालमा पनि यहाँ विभिन्न जात थिए, तैपनि सबै छासमिस भएर मिलेर बसेकै थिए र समाज व्यवस्था चलाउन सबै मिलेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकै थिए भने अहिले जातीय प्रश्न उठाएर सद्भावपूर्वक चलेको समाजमा खैलाबैला पार्न खोज्दैछन् । जात, भाषा र धर्मका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा मारमुंग्री चलेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा नेताले शत्रु्ले पनि नगर्ने कामगर्न थालेका छन् ।
सोभियत संघमा गोर्वाचोभले ल्याएको पेरोस्त्रोइका र ग्लासनोस्तको भूकम्पले पूर्वी यूरोपका देशलाई छिन्नभिन्न पारेपछि ती देश टुक्रा टुक्रा भए । सोभियत संघ नै १५–१६ टुक्रा भयो । युगोस्लाभिया ५–६ टुक्रा भयो । बेल्जियम भाषाका आधारमा ३ टुक्रा भयो । भारत जातीयताकै आधारमा फुटेर पाकिस्तान बनेको हो । भारत–पाकिस्तान विभाजित हुँदा हिन्दु–मुुस्लिम दंगामा हजारौंले ज्यान गुमाए भने १ लाख जति महिला बलात्कारमा परेका थिए । त्यसै गरी पूर्वी पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश बन्दाको द्वन्द्वमा १ लाखभन्दा बढी मानिस मरेका थिए भनिन्छ । भाषाकै कारण युक्रेन–क्रिमियाको हालत पनि देखेकै हो । भारत टुक्रिने क्रम पनि रोकिएको छैन । अफ्रिकी मुलुकहरू जात र भाषाकै झगडाले जर्जर छन् । यो सबै देखेर पनि हाम्रा नेताका खिया परेका दिमागमा संघ राज्यबाट राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्ने कुरा किन पस्दैन ? किन संघीयताको घाँडो भिर्न खोज्दैछन् ?
हिजो सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा गरिने राजनीति आज शुभलाभ र जातीयताका आधारमा गर्न थालिएको छ । जातीय राज्यकै प्रश्नमा कुरा बाझेर कांग्रेस र एमालेबाट कट्टर जातिवादीहरू अलग भएर पार्टी नै खोले अर्थात् राजनीतिक दलका आधार नै खलबलिए । यो सबैको कारकतत्व चाहिं माओवादी नै हो । यिनले स्वार्थवश राष्ट्रियता र अखण्डता बिर्सेका छन् । प्रान्त (प्रदेश) छुट्याउने, एकल जातीय संघराज्य बनाउने जस्ता विखण्डनवादी सोचाइमा माओवादीलाई मधेशवादी दलले साथ दिए पनि उनीहरू भारतकै इशारामा छन् । आँखा चिम्लेर राष्ट्रविरोधी उत्ताउलो काममा अग्रसर भएकाहरू यो देशलाई सग्लो र सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर सोझो बाटोमा नआउने हो भने उनीहरू जनताबाट स्वतः टाढा हुन बेर लाग्ने छैन ।
यस सानो देशका हामी थोरै नेपाली युगौंदेखि मिलेर बसेको देख्न नसक्नेहरूका मच्चाटमा लागेर हाम्रै नेताले बाटो बिराउँछन् भने पराइलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन । एकैदिनमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण स्थलार्गबाटै पुग्नसकिने थोरै जनसंख्या भएको नेपाल (भारतको एउटा शहरको जति जनसंख्या पनि नेपालको छैन)लाई छिन्नभिन्न पारिदिने भेदियाहरूका मतिमा लागेर हाम्रा नेताले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छन् । गाउँ–जिल्लाका निकायलाई अधिकार नपुगे थपेर दिन सकिन्थ्यो । यहाँ ७५ जिविस मार्फत विकास निर्माणका कार्य भैरहेकै छन् । चार हजार जति गाविस र आधासय जति नगरपालिका बाहेक १४ अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रमार्फत आआफ्ना क्षेत्रका कार्य संचालन भैरहेकै छन् भने अब फेरि संघराज्यका नाममा भैरहेको संरचनालाई भत्काउने हो भने यो देश सग्लो रहला ? अहिलेसम्म मेरो जिल्ला सरकार स्याङ्जामा थियो, अब प्रदेश सरकार मान्न म कुनै बेजिल्ला जानुपर्नेछ ।
अहिले कल्पना गरिएको संघीयता पानीभित्र देखिने जूनजस्तै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न न सजिलो छ, न त सम्भव नै । सर्वप्रथम प्रादेशिक राजधानीको विवाद आउँछ । सीमाना र प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँडको विवाद आउँछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यपालिका–न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाहरूको क्षेत्र निर्धारणका समस्या निस्कन्छन् । केन्द्रीय सरकारमा पनि जति निकाय छन् ती सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि रहने स्थितिले तहतहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका प्रसंगमा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्कापट्टा, कमिशन आदिमा प्रदेश र स्थानीय तहका नेता मात्रै होइन जातजातिबीच पनि स्वार्थका झगडाले फणा उठाउनेछ । समावेशी, समानुपातिक, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता विवादास्पद प्रावधान सबैलाई मान्य नहुनु निश्चित हुनाले विभिन्न जातजातिबीच द्वन्द्व निम्तिनु अवश्यंभावी छ । त्यस्ता झगडाले घातक रुप पनि लिनसक्दछ भन्ने कुरा सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, भारत–पाकिस्तान र बंगलादेशका विभाजनले ल्याएका दुरवस्थाका उदाहरण पनि बिर्सनु हुँदैन ।
त्यस्तो स्थिति आएमा हामी आठदश वर्ष अन्योल, अनिर्णय र अस्थिरताकै अवस्थामा रुमलिएर आपमै मारामार गर्ने र फाइदा अरुलाई हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर शतर्क हुनैपर्छ । हतारमा संविधान निर्माण गरेर संघीयताको टुंगो नलगाउँदा नाकाबन्दी समेत मुलुकले खेप्नुप¥यो । यो अहिले केही मत्थर भएको जस्तो देखिए पनि कुनबेला कसको स्वार्थले फेरि उत्ताउलो भएर प्रकट हुने हो पत्तो छैन ।